Kubuda: Wedzera Zvako Zvemukati Kushambadzira ROI ine Inopindirana Zvemukati | Martech Zone
Pane podcast yadarika naMarcus Sheridan, akataura nezve matekiniki ayo mabhizinesi ari kushaya chiratidzo pavari kuvandudza yavo yekushambadzira yedhijitari. Iwe unogona kuteerera kune iyo yese episode pano:
Imwe kiyi yaakataura nayo sevatengi nemabhizinesi vachiramba vachizvitungamidza mafambiro evatengi zvinhu zvemukati. Marcus akataura mhando nhatu dzezvinhu zvinofambidzana zvinogonesa kuzvitungamira:
Kuzvigadzirira wega - kugona kweiyo tarisiro yekumisikidza zuva uye nguva yekudyidzana nechiratidzo kuburikidza nedemo, webinar, kana kufona kwekutsvaga.
Kuzvitengesa - kugona kweiyo tarisiro yekunzwisisa zvirinani mutengo wechigadzirwa kana sevhisi. Izvi hazvifanirwe kuwanikwa zvakajeka, asi kunyangwe kupa iyo yakakoshesesa parwendo.
Kuzviongorora - kugona kweiyo tarisiro yekufamba kuburikidza nhevedzano yemibvunzo kana yekufanirwa iyo inovabatsira kuwana kurudziro pane zvigadzirwa kana masevhisi ako kutenga.
Kubuda: Inopindirana Zvemukati Platform
Kusiyana neshambadziro, zvinowirirana zvemukati zvinowedzera kukosha nekuvaka kuvimba uye kubatsira mutengi kutyaira kusvika padanho rinotevera murwendo rwekutenga. Zvekufambiswa zvemukati zviripo zvehutachiona uye zvinoshanda kwazvo pakubata vashandisi vako… dzinoda kusvika makumi matatu muzana kupfuura peji rekumira. Zvekudyidzana zvemukati zvakare zvinokutendera iwe kuti uwane yakawanda yakajeka nzwisiso kune vashandisi vako sezvavanopindura mibvunzo uye kuisa data.
Kubatanidza zvinofambidzana zvemukati zvinotyaira mhedzisiro ne:
Wedzera Mitero Yekutendeuka Yekutungamira - Shandisa Outgrow's 1000+ akanaka pre-akagadziridzwa matemplate ekuvandudza ako ekushandurwa mareti kusvika pamusoro pe40%!
Kodzera Kutungamira uye Wedzera Kukosha - Ipa mhinduro dzakasarudzika kumibvunzo inokatyamadza yemutengi wako, uchikodzera zvaunotungamira
Shambadzira Mukati Maminetsi Chero kupi - Embed Outgrow zvemukati pane peji rako, se popup, mune chat, kubuda nzira, kana pane yako subdomain.
Akangwara Analytics uye Dhata Kubatanidzwa - Tora ruzivo rwevatengi uchivabatsira, sanisa vateereri vako uye ubatanidze data rako nematurusi anopfuura chiuru.
Outgrow's Inopindirana Zvemukati Kuvandudza Studio
vose Kubudamarongero akaedzwa zvakanyanya uye akagadziridzwa kutendeuka, kubatanidzwa, saizi screen, mabhurawuza, uye kugovana. Vavaki vavo vane hungwaru vanopa imwechete sarudza, yakawanda-sarudza, manhamba anotsvedza, zviyero zvemaonero, ratings, zuva / nguva yekunhonga, faira kurodha, nezvimwe. Zvemukati zvemukati zvaunogona kuvaka zvinosanganisira:
Yakamisikidzwa Miedzo / Ongororo
Izvo zvirimo zvinogona kuve nemazita akazara kuratidza brand yako, kupa asina muganho matavi emubvunzo wega wega, kupa mameseji ane mameseji zvichienderana nemhedzisiro, uye inogona kuratidzwa kuburikidza nefunnel analytics kuti ipe nzwisiso mukuita kwako kwemukati mekuita. Chaiyo-nguva yezvinobuda inogona kusanganisira inochinja mitsetse machati, mapai machati, matafura, mabhawa machati, radar machati, kana polar machati.
Outgrow inoita zvirinani kwatiri kupfuura mablog uye maebook nekuda kwehunhu hwahunopa. Izvo hazvisi zvekuverenga chete kana kutarisa zvirimo futi, tarisiro yega yega inowana yakasarudzika uye yakakosha ruzivo mune chaiyo nguva kunyangwe iri kuburikidza nek Calculator, quiz, kurudziro, kana chatbot.
Leonard Kim, WePamusoro Kushambadzira Anofurira, Forbes
Kubuda inosanganisira zvinopfuura chiuru zvakabatanidzwa nedata rakajairika, kutengesa, uye maturusi ekushambadzira anosanganisira Google Sheets, Aweber, Mailchimp, Marketo, Hubspot, GetResponse, Emma, ​​MailerLite, Salesforce Pardot, Salesforce CRM, Active Campaign, Drip, nezvimwe!
Gadzira Yako Yekutanga Inopindirana Zvemukati Nekunze Kwemahara
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu Kubuda affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: machatikufunga kwebazikuverengakarukuretakarukureta muvakichatbotchatbotsmameseji mamesejifomu muvakinezvimirofanera analyticswedzera shanduko mitengowedzera kutendeukawedzera kubatanidzwakuwedzera kutengesazvinowirirana zvemukatimutsara machationline yekuongorora anovakaonline Calculator anovakaonline chatbot anovakaonline quiz anovakaonline kuongorora muvakionline yekuongorora chishandisokubudamachati epayimachati macarquiz muvakimibvunzomachati eradarmuvaki wekuongororamatafura
Great post semazuva ese Douglas,
Zvemukati zvinogona kubuda zvemazuva nekukurumidza online, kunyanya kana iwe uri muindasitiri inokurumidza. Kunyangwe izvo zvinonzi "evergreen" zvemukati, izvo zvinofanirwa kuve zvakakosha kwemakore akati wandei, muchirevo, zvinogona kunge zvisingafadze vaverengi kana kuGoogle mumakore akati wandei.